धेरै पक्षीय Okroshka - इतिहास, लाभ, व्यंजनहरू
गर्मी गर्मी बाहिर छ र भान्सा मा समय खर्च गर्न यति अल्छी हुँदा, तपाईं बगैचामा जान सक्नुहुन्छ, केही crunchy काक्रा, ताजा मूलीहरू छान्नुहोस्, चाँडै साग छान्नुहोस्: एक जवान प्याज, प्वाल, अजमोद, sorrel र सबै कुरा को प्वाँख। हातमा आउँदछ - तपाईं गल्ती गर्न सक्नुहुन्न, त्यहाँ धेरै हरियाली छ, राम्रो छ।
स collected्कलन गरिएका सबै चीजहरू धुनुपर्छ, राम्ररी कुरेर, नुनले छर्कनु पर्छ, होममेड क्वास र भियोलाले भरिन्छ, सरल ओक्रोश्का तयार छ। यसले गर्मीको दिनमा भोक र तिर्खा पूर्ण रूपमा सन्तुष्ट पार्छ र तातो पाक सम्बन्धी आक्रमणको आवश्यकता पर्दैन।
यस रेसिपीबाट तपाईले देख्न सक्नुहुनेछ, ओक्रोस्कामा दुई कम्पोनेन्ट हुन्छन् - काटिएको तरकारी र जडिबुटी, जुन पुरानो समयमा क्रुचेभो र एक तरल आधार भनिन्थ्यो, क्लासिक संस्करणमा यो क्वास हो। कुनै गाह्रो छैन, यो हो? कुनै पनि नौसिखिया होस्टेसले त्यस्तो थालमा ह्यान्डल गर्न सक्दछ।
तर ओक्रोस्काको आफ्नै गोप्य कुरा पनि छ, यो बिना यो एक अति उत्तम रेस्टोरेन्ट डिश नहुने भएकोले विदेशी पाहुनाहरूलाई चकित पार्नेछ। सबै विस्तारको बारेमा कुरा गरौं।
के krochevo बनेको छ
धेरै साग, आधा जसमा हरियो प्याज हुनुपर्छ। कोहीले ओक्रोस्कामा केवल हरियो पंखहरू राख्छन्, अरूले सेतो प्याजको डाँठहरू यसमा काट्छन्।
पाककृती स्वागत... यो टुक्रामा थप्नु अघि यसलाई काटिएको सागलाई नुनको साथ दाउराको क्रुशसँग तताउन सिफारिस गरिएको हुन्छ, वा हल्का रूपमा यसलाई तपाईंको हातले मार्स गर्नुहोस् र यसलाई केही बेर खडा गर्नुहोस् ताकि यसले जुस बाहिर निकाल्छ र टेस्टीर बन्छ र बढी सुगन्धित।
Okroshka को लागी, चिकनी छालाको साथ सलाद लिनु राम्रो हुन्छ, तर तिनीहरूको अनुपस्थितिमा pंप्स्डहरू पनि उपयुक्त हुन्छन्। तपाईंले भर्खरै काट्नु अघि प्रयास गर्नु पर्छ, चाहे ती तीतो हो। कहिलेकाँहि नुनिलो र अचारको काँक्रा ओक्रोस्कामा काटिन्छ।
यसको प्रसन्न र color्ग र पेयकेन्ट स्वादको साथ ताजा र रसदार, यसले कुनै पनि ओक्रोश्का सजाउँदछ।
अवश्य पनि, तपाईलाई तिनीहरूसँग ओकरोस्काका लागि टिन्कर गर्नुपर्नेछ। पहिले, तिनीहरूलाई कडा-उमालेको हुनु पर्छ: चिसो पानीको साथ सासप्यानमा राख्नुहोस्, फोडामा ल्याउनुहोस् र low-6 मिनेटको लागि कम तातोमा राख्नुहोस्। चिसो पानी संग कुल्ला, चिसो र त्यसपछि सफा।
चिसो अण्डाहरू केवल काटेर सानो टुक्रामा जोड्न सकिन्छ।
पाककृती स्वागत... वा तपाईं डिशको स्वाद परिवर्तन गर्न सक्नुहुन्छ कडा-उमालेको अण्डाको जुसों सरसों र निम्बूको रसको साथ रगेर र चिनीको एक बिट थपेर। एक चाकूको साथ बाँकी प्रोटीन बारीक काट्नुहोस्।
यसले तपाईंको खानालाई बढी सन्तोषजनक बनाउँदछ र यस गर्मीको सूपको स्वादलाई विविधता दिनेछ। ओक्रोस्कामा फ्राइड र उमालेको मासु, धूम्रपान गरिएको कुखुराको खुट्टा, ह्याम, उमालेको र अर्ध-धुम्रपानयुक्त सॉसेज, उमालेको अफल (मुटु, फोक्सो) हुन्छ। गोमांस जिब्रोको साथ ओक्रोस्कालाई स्वादिष्टता मानिन्छ, र केहिले यसलाई कुचिएको बेकन समावेश गर्दछ। तपाईं फ्रिजमा बाँकी रहेका मासुका बचेका चीजहरू स collect्कलन गर्न सक्नुहुन्छ र चिसो कटौतीको साथ Okroshka बनाउन सक्नुहुन्छ। तपाईं लामो समयको लागि सूचि बनाउन सक्नुहुन्छ - कल्पनाको लागि क्षेत्र असीमित छ।
एक पाक स्वागत पुरानो दिनमा, ओक्रोस्काको लागि काटिएको मासुलाई ग्रेटेड हर्सराडिससँग मिसाइएको थियो र पिसाउन दिइन्थ्यो ताकि मासु मसलादार गन्धले भरिपूर्ण भयो।
माछाको साथ ओक्रोस्काको बनाउने विधि अब लगभग बिर्सेको छ, यसले उमालेको नदीको माछाको फाईलहरू प्रयोग गर्‍यो - पाइक पर्च, गुलाबी सामन, ट्राउट, टेन्च। तर पाईक ओक्रोस्काका लागि उत्तम मानिन्थ्यो, जससँग बलियो माछा र आत्मा छैन र मासु जस्तो चाखिन्छ।
जे भए पनि, थालमा माछाको हड्डी नभएको कुरा सुनिश्चित गर्नु धेरै महत्त्वपूर्ण छ। माछाको सट्टा वा यससँगै समुद्री खाना थप्न निषेध गरिएको छैन
र डनमा, तिनीहरू अझै पनि सुक्खा माछाका टुक्राहरूसँग ओक्रोस्का पकाउँछन्, वा तिनीहरूले ओक्रोस्काको टोकाइमा त्यस्ता माछाहरू खान्छन्।
Okroshka को लागी यो "वर्दीमा" उमालेर नरम, चिसो, पिलिएको र crumbs मा काटेर सम्म। फ्राईड आलुको टोकेको साथ ओक्रोस्का खान धेरै स्वादिलो ​​हुन्छ, तर त्यसोभए तपाईंले डाइट छोड्नुपर्नेछ।
यसलाई उकलेको गाजर, फलफूल, नुनिलो वा उमालेको च्याउ ओक्रोरोस्कामा जोड्न निषेध गरिएको छैन।
Okroshka को लागी कसरी काट्ने
क्र crम तयार गर्न, चयन गरिएका उत्पादनहरू सानो क्युब्समा कुचिन्छन् वा सानो स्ट्रिपहरूमा काटिन्छ, तपाईंलाई जस्तो मनपर्दछ।
कसैलाई ठूलो टुक्रा मन पर्छ, कोही सानो, तर grater मा Okroshka मा समावेश गरीएको उत्पादनलाई ग्रेट गर्न डिशमा एक आक्रोश हो।
थोरै समय खर्च गर्नु उत्तम हो, तर सबै ठीक गर्नुहोस्। यो वांछनीय छ कि उत्पादनहरू राम्रोसँग र समान रूपमा कटौती गरिएको छ, तब समाप्त डिशको आकर्षक उपस्थिति हुनेछ।
Okroshka तरल आधार
त्यसोभए, यो crumbly तयार छ। कसरी भर्ने? केही व्यक्तिहरू यस गर्मीको सूपलाई मजाक गर्दै भन्छन् "Kvass साथ सलाद डूस्ड"। तर Okroshka सँधै kvass को साथ खन्याइएको छैन।
त्यहाँ एक मुख्य अवस्था छ - तरलमा एक अमिलो स्वाद हुनुपर्दछ। निम्बूको रस प्राय: जसो बेसलाई एसिडिफ गर्न प्रयोग गरिन्छ।
Kvass मा Okroshka - नुस्खा
Kvass बढिमा बिना रूस को एक राष्ट्रीय खजाना भन्न सकिन्छ। पूर्व क्रान्तिकारी समयमा, प्रत्येक परिवारको kvass को लागी आफ्नो परिवार विधि थियो। प्रायः यो माल्टको साथ बनेको थियो र, यो राई वा गहुँ माल्ट, अन्धकार वा हल्का, लगभग सेता क्याभास प्राप्त भएकोमा निर्भर थियो। Okroshka सेतो kvass मा पकाइएको थियो, यो खट्टा र अँध्यारो भन्दा तीखो थियो।
घरमा kvass बनाउनु आज कुनै गाह्रो छैन। यो गर्नका लागि तपाईलाई सेतो र कालो रोटी, सुक्खा खमीर, चिनी र पानीको भारी फ्राइड रसको आवश्यक पर्दछ - र केहि दिनहरूमा सजीव पेय तयार छ।
Okroshka खट्टा दुध वा केफिरको साथ - खाना पकाउने सुविधाहरू
यो पछिल्लो संस्करण हो र रूसको दक्षिणी बाहिरी भागबाट आएको हो। पूर्व-किण्वित दुध उत्पादनहरू प्राय: १: १ अनुपातमा सादा वा खनिज पानीले पातलो हुन्छन् ताकि तिनीहरू यति बाक्लो नहोस्।
त्यहाँ कुटीर पनीर बनाएपछि छोडेको मरेको ओक्रोशका बनाउनका लागि पकाउने विधिहरू छन्, वा बटर मिर्च मथ्ने पछि प्राप्त गरिन्छ, तर ती कपटको प्रयोग गर्दैनन्। यसको विपरित, मोटोपनाको लागि ठूलो मात्रामा खट्टा क्रीम वा मट्कीमा छालामा थप्नु पर्छ।
ओखरोश्काको साधारण उदाहरणहरू चिनी दुधले बनेको प्रसिद्ध बल्गेरियाको चिसो सूप टराटर ताजा काँक्रा र पुदीनाको पात र धेरै बैजनी तुलसी पातहरूको साथ उज्बेक चालोप हो।
सादा वा खनिज पानीमा Okroshka
यो एक चरम केसका लागि विकल्प हो, जब तपाईं Okroshka चाहानुहुन्छ, तर हातमा कुनै kvass वा kefir छैन। यद्यपि, पानी पनि पहिले थोरै एनोब्लेड हुनुपर्दछ - यसमा आधा निम्बूको रस निचोरेर एसिडयुक्त।
पहिलेको समयमा यस उद्देश्यका लागि काकडीको अचार वा भिजेको स्याउको रस यसमा हालिन्थ्यो। आधुनिक प्रयोगकर्ताहरूले खट्टा क्रीमको साथ पानी र मेयोनेजको साथ खनिज पानीको मिश्रण सुझाव दिन्छन्।
तपाईं फल infusions, kombucha को संचार मा Okroshka पकाउन सक्नुहुन्छ। वा यो क्रुर विकल्प प्रयोग गर्नुहोस्: कमजोर बियरको साथ crumbs खन्याउनुहोस्। ओमरोश्का कसरी शैम्पेनमा सुनिन्छ? केही व्यक्तिले यस विकल्पको स्वाद पनि लिएका छन्।
कसरी तालिकामा Okroshka सेवा गर्ने
यस्तो साधारण कार्यको पनि यसको आफ्नै subtleties छ।
तपाईं Okroshka एक सुन्दर tureen वा सॉस प्यानमा, चिसो सूप जस्तै सेवा गर्न सक्नुहुन्छ। यो धेरै राम्रो छ यदि यसलाई कम्तीमा एक घण्टा सम्म चिसो ठाउँमा खानुभन्दा अघि इन्फ्यूज गरिएको छ। यो नियम विशेष गरी खट्टा दुधमा पकाइएको Okroshka लाई लागू हुन्छ।
दोस्रो संस्करणमा, तिनीहरूले सलादको कचौरामा crumbly सेवा, र यो एक सुन्दर माटो वा गिलास जग मा kvass। त्यसोभए सबैले खानेकुरा पातलो वा गाँठोलाई आफ्नो मनपर्ने बनाउन सक्छन्।
तपाई अझ अगाडि बढ्न सक्नुहुन्छ र काटिएको खानालाई अलग कचौरामा मिलाउन सक्नुहुन्छ ता कि सबैजनाले आफ्नो उत्तम ओक्रोश्का बनाउन सक्छन् - मासु वा शाकाहारी।
एक नियमको रूपमा, तिनीहरू कालो रोटीमा काभ्यासमा ओक्रोस्का खान्छन्, र किण्वित दूध - सेतो संग। रोटी राम्रो स्वाद यदि यो टोस्टर मा हल्का toasted छ।
कसरी Okroshka भर्ने
खट्टा क्रीम र रेडीमेड सरसों वा मसलादार मेयोनेज टेबलमा हुनु पर्छ। यदि तपाइँ चाहनुहुन्छ भने, तपाइँले ग्रेटेड हर्सराडिस वा राम्रोसँग काटिएको मूलीको साथ कचौरा राखेर सर्भिंगमा विविधता ल्याउन सक्नुहुन्छ।
यदि तोरी दुबै क्याभास र केफिरसँग राम्रोसँग जान्छ भने हर्स्रेडिश kvass मा Okroshka मात्र थपिन्छ।
एक पाक स्वागत मूली लामो रूसमा kvass संग खाएको छ, र यसको जन्मजात कटुता हटाउन, काटेको जरा तरकारी सेवा भन्दा आधा घण्टा भन्दा फ्रिजमा राखिन्छ।
असामान्य Okroshka व्यंजनहरु
यो १ the औं शताब्दीको मध्यमा रूसी टभर्नहरूमा सेवा दिन शुरू भयो। जहाँसम्म, २ शताब्दी भन्दा बढीको लागि, मानिसहरू ओक्रोस्काको यति धेरै प्रेममा परेका छन कि उनीहरू अधिक र अधिक नयाँ रेसिपीहरू र भिन्नताहरूको साथ आउन थकित हुँदैनन्। केहि चाखलाग्दो कुरा जुन तपाईं प्रयास गर्न सक्नुहुन्छ, मूल्या ,्कन गर्न सक्नुहुन्छ, नोट लिनुहोस्।
टमाटर को रस मा Okroshka
Kvass को सट्टामा टमाटरको रस काँकडी वा टमाटरको अचार, कागतीको रस र ट्याबस्को सॉसको केही बूँद वा एक चुटकी रातो मरिचको मसला मिसाइन्छ। सम्भवतः, यो विचारका लेखक स्पेनिश चिसो टमाटर सूप गजापाचोबाट प्रेरित थिए।
मासु ब्रोथमा Okroshka
यो नुस्खा कुनै पनि हालतमा कम क्यालोरीको विधि होईन, तर तपाईं याद गर्न सक्नुहुन्छ कि भर्खरका डाँकहरूले सम्भवत को खानामा कुखुराको ब्रोथ सहित सिफारिस गरे। विशेष अवस्थाहरूमा, जब तपाईंले आफ्नो शक्तिलाई गम्भीरताका साथ बलियो बनाउन आवश्यक पर्दछ, Okroshka को लागि यस्तो नुस्खा पनि काममा आउनेछ।
चिसो शोरबा, पातलो मासुबाट पकाएको, सतहबाट स्थिर फ्याटको सेतो ड्रपलेटहरू हटाउनका लागि पानी निकाल्नु पर्छ। यसमा निम्बूको रस, थोरै चिनी र सरसों थप्नुहोस् र यसलाई Okroshka बनाउनका लागि kvass को सट्टामा प्रयोग गर्नुहोस्। र यसलाई अझ चाखलाग्दो र सन्तोषजनक बनाउनको लागि यो मेयोनेजको साथ पूर्व-मिश्रित हो। अवश्य पनि, यो विधि सबैको लागि छैन।
लसुनको साथ केफिरमा बाक्लो Okroshka
उत्पादनहरूको सेटको लागि धेरै चाखलाग्दो विधि। यसले घण्टी मिर्च, टमाटर, काक्रा, सलाद र प्याज समावेश गर्दछ। छुट्टिएको लसुन, मेयोनेज, निम्बूको रस र नुनबाट Okroshka को लागि छुट्टै ड्रेसिंग तयार गर्नुहोस् र यसलाई टुक्रामा थप्नुहोस्। सबै कुरा मिक्स गर्नुहोस् र अनिडिल्टेड केफिरमा खसाल्नुहोस्। यो धेरै बाक्लो हुनुपर्छ।
दागेस्तान Okroshka उमालेको भेडाको साथ - नुस्खा
निश्चित रूपमा लामो-फलदार काँक्रा (त्यस्ता सलाद प्रजातिहरू छन्) र डिल। यसको विशेषता यो हो कि ओक्रोश्काका लागि काटिएका उत्पादनहरू घुमाउरो दूधमा राखिन्छन् पानी (१: १) को साथ पातलो, र यसको विपरित होइन। हुनसक्छ यो क्रमले डिशको स्वादलाई पनि असर गर्छ? यो र यो प्रयास गर्न लायक छ।
र Okroshka सुरु भयो टूरी - गरिब को एक नम्र पकवान। यसको नुस्खा सुरक्षित गरिएको छ र तपाईं यसलाई आजको लागि चासो बाहिर पकाउन कोशिस गर्न सक्नुहुनेछ। यसको लागि कालो रोटीका सुकेका टुक्राहरू लसुनको साथ घस्राइन्छ र सानो क्युब्समा काटिन्छ। काटिएको ताजा काक्रा, हल्का कुचिएको हरियो प्याज नुन र काटिएको हर्सराडिस जड थप्नुहोस्। सब भन्दा माथिको डाँडा एक चम्चा वनस्पति तेल र मिक्स को साथ। Kmbass संग, crumbly, बिल्कुलै, डालो। "रोटी र kvass जस्तै, हामीसँग सबै कुरा छ" - यो कुनै कुराको लागि होइन जुन रूसमा यो उखान प्रयोग भइरहेको थियो।
दक्षिणी मानिसहरूले पनि यस्तै खालका चीज पाए। अर्मेनियाईमा जेल यसरी नै तयार छ: सुक्खा कालो रोटी र काटिएको प्याजको साना के्युब पानीको साथ पातलो केफिरको साथ खन्याइन्छ (१: १)। एकदम सरल
टुर्यु खाना पकाएपछि तुरुन्तै खाइन्छ, जबसम्म रोटीको टुक्राहरू चिप्लो मासमा नरम हुँदैनन्।
Okroshka का फाइदाहरू
यो देख्न सजिलो छ कि दक्षिणी क्षेत्र र पूर्वमा यसलाई प्राय: खट्टा दुधले पकाइन्छ, र रूसमा - kvass बाट। तर, अनौठो कुरा, दुबै भिन्नताहरूले मानव शरीरमा उस्तै प्रभाव पार्दछ। किण्वित दुध उत्पादनले फाइदाजनक सूक्ष्मजीवहरूको ठूलो संख्या समावेश गर्दछ भन्ने तथ्यलाई धेरै भनिन्छ। जहाँसम्म, साधारण रूसी kvass तिनीहरूलाई कम छैन।
तथ्य यो छ कि माल्ट यसको तयारीमा प्रयोग गरिन्छ। माल्ट भनेको के हो? यी अनाजका अंकुरित अन्नहरू हुन् - जौ, राई र गहुँ। चिनीको उपस्थितिमा खमीरको किण्वनको क्रममा, धेरै ट्रेस एलिमेन्टहरू र भिटामिनहरू, मानवहरूको लागि अत्यन्त उपयोगी, यसबाट संश्लेषित हुन्छन्, विशेष गरी सी र समूह बी।
Kvass, बिना बढाइचढाइको, एक जीवित पेय हो। यसको प्रयोगको लागि कुनै contraindication छैन। फर्मेन्ट मिल्क ड्रिंकजस्तै यसले ग्यास्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्र्याक्टको क्रियाकलापमा फाइदाजनक प्रभाव पार्दछ, मेटाबोलिजमलाई सामान्य बनाउँछ र सामान्यतया, मानव शरीरमा यसले एक सुदृढ प्रभाव पार्दछ। यसबाहेक, kvass ले दाँत इनेमेल मजबूत गर्दछ। केवल गर्भवती महिला र बच्चाहरूलाई मात्र यो प्रयोग गर्न प्रतिबन्धित गरिएको छ, किनकि यो मादक पेयको हो, यद्यपि यसमा रक्सीको अंश थोरै छ - केवल १.२%।
तर यो याद राख्नु पर्छ कि औद्योगिक क्वासले पाश्चराइजेशन र यसमा लाभदायक सूक्ष्मजीवहरू पार गरिसकेको छ, कास, मर्न, र पेय पदार्थले यसको अधिकांश उपचार शक्ति गुमाउँछ। यो इच्छालाई मुट्ठीमा लिन लायकको हुन्छ, आफ्नै क्वासलाई बनाउने - यसलाई प्रत्येक तीन रटाईको ठूलो भाँडोमा भान्छामा उभिन दिनुहोस्।
यदि हामी kvass को क्यालोरी सामग्री को बारे मा कुरा गर्छौं, तब यो उत्पादन को १०० g मात्र २ k kcal छ। खट्टा दुधको क्यालोरी सामग्री लगभग दुई गुणा बढी छ - 27 100 केसीएल प्रति १०० ग्राम, तर हामी सम्झन्छौं कि ओक्रोश्काको तयारीका लागि उनीहरूले घुमाउरो दूध आधा पानीले पातलो प्रयोग गर्छन्।
तयार खानाको क्यालोरी सामग्रीको नाम लिन गाह्रो छ, किनकि यो प्रयोग गरिएको उत्पादनहरूमा, विशेष गरी मासुमा निर्भर गर्दछ। औसतमा, क्लासिक Okroshka को क्यालोरी सामग्री उत्पादनको १०० g प्रति k 78 kcal भन्दा बढी हुँदैन। यो पकवान तौल घटाउन खोज्नेहरूको लागि उत्कृष्ट आहार अवयव हो।
र यदि तपाइँ kvass र खट्टा दुध को सबै फाइदाजनक गुणहरु लाई पनि ध्यानमा राख्नुहुन्छ, भने Okroshka लाई केवल तपाइँको खानामा समावेश गर्न आवश्यक पर्दछ, विशेष गरी तातो गर्मी अवधिमा।
एक पाक स्वागत तातोमा, बरफको क्युब्स प्राय: ओक्रोस्कामा राखिन्छन्, यो थालीमा उत्कृष्ट स्फूर्ति प्रदान हुन्छ। कहिलेकाँही क्रनबेरीहरू फ्रिजको लागि पानीमा राखिन्छन्, यसले डिशलाई एक विशेष तेज दिन्छ।
क्लासिक Okroshka नुस्खा
मैले भन्नु पर्दछ कि यो प्रयोगहरूको लागि उपयुक्त डिश हो: तपाईं ती दुई मध्ये पकाउन सक्नुहुनेछ, जहाँ त्यहाँ एकल साझा घटक हुँदैन, र दुबैलाई ओक्रोश्का भनिन्छ!
अन्तमा, प्रति व्यक्ति एक क्लासिक Okroshka को लागि एक नुस्खा, जो तपाईं वरिपरि नाच गर्न, घटक थपेर वा बाहेक।
क्लासिक Okroshka को लागि सामग्री:
१ कडा उमालेको अण्डा;
२ साना ताजा काक्रा;
साग को एक ठूलो गुच्छा, राम्रो आधा जसमा हरियो प्याज हो;
उमालेको दुबला मासुको g० ग्राम;
चाहिएको मोटाई को एक डिश प्राप्त गर्न पर्याप्त kvass;
ड्रेसिंगको लागि १ चम्चा चम्चा खट्टा क्रीम।
ड्रेसिंगको लागि १ चम्मच खट्टि क्रीम। यस आदिवासी रूसी पकवानका रहस्यहरू प्रकट हुन्छन्, र प्राप्त ज्ञानको आधारमा सबैजना आ-आफ्नै ओक्रोशकासँग आउन सक्छन् जुन एक मनपर्दो पारिवारिक पकवान हुनेछ, र यसको पारिवारिक नुस्खा विरासतमा आउनेछ। सबै भन्दा पछि, यो यस्तो स्वादिलो, स्वस्थ र विशिष्ट पकवान हो।
बाक्लो सूपहरू: फोटाहरूसहितका व्यंजनहरू
खनिज पानीमा ससेजको साथ ओक्रोश्काका लागि नुस्खा
सूपहरू के हुन्? सूपका प्रकारहरू
गाईको मासु संग स्वादिष्ट Okroshka
58 सेकेन्डमा उत्पन्न डाटाबेसमा 0,493 प्रश्नहरू।